बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति बगाए पछी गहभरी आशु पर्दै एक वृद्द भन्छन : ‘मेरो त सर्वस्व लुटियो’ रातभरी सुतेको छैन (भिडियो) – Sapana Sanjal
बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति बगाए पछी गहभरी आशु पर्दै एक वृद्द भन्छन : ‘मेरो त सर्वस्व लुटियो’ रातभरी सुतेको छैन (भिडियो)
June 17, 2021 192
Sapana Sanjal : वर्षाका कारण आएको बाढीले गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत आठ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् । तीन चिनियाँ, तीन भारतीय र दुई नेपालीसहित आठ कामदार बेपत्ता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीयबासीको सहयोगमा उनीहरुको खोजी भइरहेको छ । त्यस्तै मेलम्चीमा बाढीमा चिनिया र भारतीय नागरिक सहित २० जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा तीन भारतीय र तीन चिनियाँ नागरिकसमेत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्माणस्थलमा रहेका ७६ जनालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ र धुलिखेल ल्याइएको आयोजनाले जनाएको छ । उद्धार भएका सबैको अवस्था अहिले सामान्य छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ, पानी प्रशोधन केन्द्र र मुख्य बाँधमा क्षति नपुगेको विवरण प्राप्त भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको क्याम्पहरु, उपकरणहरु, निर्माण सामग्री, पहुँच सडक र पुल बाढीले बगाएको छ । मङ्गलबार साँझ झण्डै सात बजे आयोजना क्षेत्रमा बाढी पसेको थियो । अम्बाथानस्थित ‘हेडवक्र्स’ भन्दा माथि परिरहेको अबिरल वर्षाको कारण बाढी आएको थियो ।बाढीले आफ्नो १० करोडको सम्पति गएपछि एक वृद्द भावुक हुदै मिडियामा आफ्नो दुखेसो यसरी पोख्छन । हेर्नुहोस् तलको भिडियोमा –
Prevसात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं
Nextमृत छोरा ब्यूँताउन पुगेकी महिलालाई बुद्धले दिए यस्तो ज्ञान
यिनै रहेछन् भेरीमा यति ठुलो घटना घटाउने दाङका मानबहादुर
नेपालमा भेटियो स्व*र्ण क*छुवा, ॐ लेखी संसारभर सेयर गरौं
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई? (1141)
२ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं !!! (994)
जतिसुकै बिजी भएपनि २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढिदिनु होला।। (855)
खोकी र ज्वरोभन्दा पनि यी दुई लक्षण देखुनु को-रोनाको स्पष्ट लक्षण हो, कस्ताे छ त तपाईहरुकाे स्वास्थ ? (793)
गर्भवती भएको भन्दै बधाई खाएर हस्पिटल जाँदा जब उनको पेटमा डाक्टरले भेटायो यस्तो चिज जस्ले सबैलाई बनायो चकित (780)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (727)
प्रियंका कार्की गर्भवती हुँदा श्रीमान आयुष्मानले बनाएको भिडियो एकैदिनमा ५ लाख बढीले हेरे , हेर्नुहोस भिडियो – (714)